Izizathu, Iimiphumo, iingozi, kunye neKamva yokufudumala kwehlabathi
Iingcali zenzululwazi ziye zazimisela ukuba imisebenzi emininzi yoluntu ibangela ukufudumala kwehlabathi ngokufaka ubungakanani obukhulu begesi ezitshatyalaliswayo emoyeni. Iigesi zelanga zokutshisa ezifana ne-carbon dioxide ziqokelela e-atmosphem kunye nokushisa okuqhekeza ngokuqhelekileyo ukuphuma kwindawo yangaphandle.
IiGesi zeGreenhouse kunye neTshintsho lweMimoya yeSizwe
Ngelixa iindawo ezininzi zomoya ezitshatyalaliswayo zenzeke ngokwemvelo kwaye ziyadingeka ukudala umbane wokugcina umbane ogcina uMlambo ufudumele ngokwaneleyo ukuxhasa ubomi, ukusetyenziswa ngabantu kwezinto ezinokusetyenziswa kwezinto ezinokusetyenziswa kwezinto ezinokusetyenziswa kwezinto ezinokusetyenziswa kwezinto ezikhoyo.
Ngokuqhuba iimoto, ukusebenzisa umbane ukusuka kwizityalo zamandla-mafutha, okanye ukufudumala amakhaya ethu ngeoli okanye kwindalo yendalo , sikhulula i-carbon dioxide kunye nezinye i-gases zokutshisa ukufudumala emoyeni.
Ukususwa kwamahlathi ngenye imvelaphi ebalulekileyo yamagesi e-greenhouse, njengoko inhlabathi ebonakalayo ikhulula i-carbon dioxide, kwaye imithi embalwa ithatha i-carbon dioxide engaphenduliyo kwi-oxygen.
Imveliso yesamente ifaka i-chemical reaction response ejongene nenani elikhulu le-carbon dioxide emkhatsini wonyaka.
Ngethuba leminyaka eyi-150 yeminyaka yezoshishino, ingxube ye-carbon dioxide yenyuka ngama-31 ekhulwini. Ngaphezulu kwexesha elifanayo, izinga leemethane zomoya, enye i-gaspe ebalulekileyo yokushisa, ikhuphuke ngama-151 ekhulwini, ngokubanzi kwimisebenzi yezolimo ezifana nokuphakamisa imfuyo nokukhula kwerayisi. Iimethane zokuvuza emithonjeni yegesi yendalo yinye inxaxheba enkulu ekutshintshisweni kwemozulu.
Kukho amanyathelo esingathatha ukunciphisa ukushisa kwegesi ebusweni bethu, sikhuthaze iinkqubo zokunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni, imithetho yokuncitshiswa kokunciphisa i-methane , kwaye sinokuxhasa iiprojekthi zokunciphisa ukutshintsha kwemozulu .
Ngaba Iintshukumo Zelanga Zendalo Zichaza Ukutshintsha Kwemozulu Yehlabathi?
Ngamafutshane, akukho. Kukho ukuhluka kwindleko yamandla esiyifumana elangeni ngenxa yezinto ezinjengeepatheni ze-orbital kunye nama-sunspots, kodwa akukho namnye ongachaza ukufudumala kwamanje, ngokwe- IPCC .
Imiphumo eqondekileyo yoTshintsho lweNkqubela yeSizwe
Imiphumo emininzi yenguqu yemozulu ingabhalwa ngqo kwiinguqu ezibaluleke kakhulu emoyeni wethu
Ngenxa yegesi ebalulekileyo kunye nokutshintshwa kobushushu phakathi kwemoya kunye namanzi olwandle, i-suite: iinguqu kwiindawo zaselwandle ziye zaphawulwa
Iindawo ezinqabileyo zomhlaba zitshatyalaliswa kakhulu kwishintsho semozulu. Ingxelo yakamuva ye-IPCC ichaze iimpembelelo kwi-ice cream ze-ice cream, i-glaciers, kunye ne-permafrost
Iziphumo zokufudumala kwehlabathi
Ukwanda kwentsholongwane evuthayo kuyatshintsha imeko yemozulu kwaye iguqula iipatheni zemozulu, ezinokutshintsha ixesha leziganeko zemvelo zonyaka , kunye nexesha leziganeko zemozulu ezibi kakhulu . Iqhwa leqhwa liphela , kwaye amanqanaba olwandle aphakama , okwenza izikhukula ziphephe. Utshintsho lwemozulu lukhokelela ekukhuselweni kokutya , kunye nokukhuseleko lwesizwe, ukukhathazeka. Iinkqubo zezolimo ziye zachaphazelekayo, kubandakanywa nemveliso yesiraphu .
Kukho nemiphumo yempilo kwenguqu yemozulu. Ukushisa okufudumala kukuvumela ukuhlaziywa kweentlobo ezimhlophe-tailed kunye namagqabha enyamazane, ukwandisa iziganeko zesifo seLyme .
Iindlela ezi-5 Ukutshintsha kwemozulu kuguqula indawo yaseAmpumn
Iziphumo zeNdalo zeCalifornia
Iimagazini zamaphephandaba kunye namajelo aphezulu
Ukusebenzisa i-TextEdit ye-PHP